Wednesday, 08 December 2010 10:52	नागरिक
विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २२- राजधानीमा बिक्री हुने प्रशोधित पानी र खानेतेलमा मिसावटको मात्र बढेको पाइएको छ। खानेपानी र तेल उत्पादकले मिसावट गरेर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो।
खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत साउनदेखि कात्तिकसम्म गरेको परीक्षणले खाने पानी र तेलमा मिसावट धेरै देखाएको छ। विभागले विभिन्न तरल खाद्य पदार्थका ५१ वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा आधाभन्दा बढीमा मिसावट पाइएको हो। 'यसले तेल र पानीको गुणस्तर अन्य खाद्य पदार्थको भन्दा कमजोर देखाएको छ,' विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्। उनले तरल खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न सजिलो भएकाले यस्तो समस्या बढेको जानकारी दिइन्।
'ठोस खाद्यमा मिसावट गर्न सजिलो छैन,' लामाले भनिन्, 'यसले पानी, तेल, दूध, घिउलगायतमा मिसावट बढी हुन्छ।' विभागले संकलन गरेका तरल खाद्य पदार्थका नमुनामध्ये २६ वटाको गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड अनुरुप छैन। 'उत्पादकले तोकिएको गुणस्तर कायम नगरेको पाइयो,' लामाले भनिन्, 'कतिपयमा मिसावटको मात्रा धेरै छ।'
परीक्षणले तरल पदार्थमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पानीको गुणस्तर कमजोर देखाएको छ। परीक्षण गरिएका प्रशोधित खाने पानी नमुनामध्ये ६६ प्रतिशत गुणस्तरहीन पाइएका हुन्। यसैगरी संकलित नमुनामध्ये भटमास तेलका ५७ प्रतिशत, तोरी तेलका ५४ प्रतिशत, घिउका ३७ प्रतिशत, दूधका ३३ प्रतिशत र सूर्यमुखी तेलका १५ प्रतिशत नमुना गुणस्तरहीन पाइएका छन्। संकलित तरल पदार्थका नमुनामध्ये गुणस्तर परिक्षणका क्रममा ५१ प्रतिशत नमुना गुणस्तरहीन भेटिएको हुन्।
साउनदेखि कात्तिकसम्म खाद्यले १ सय ७९ वटा खाद्य वस्तुको नमुना संकलन गरेको थियो। जसमध्ये ५१ वटा तरल खाद्य पदार्थ र १ सय २८ वटा ठोस खाद्य वस्तुका थिए। ठोस खाद्य वस्तुमा मिसावटको मात्रा नभेटिएको विभागको दाबी छ। 'धेरै समस्या तरलमै छ,' महानिर्देशक लामाले भनिन्, 'हामीले पनि अनुगमनमा तरललाई नै लक्षित गरेका छौं।'
नमुना परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन पाइएका वस्तु उत्पादक र बिक्रेताको विषयमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको लामाले जानकारी दिइन्। 'उनीहरुसँग बयान लिँदै छौँ,' उनले भनिन्, 'बयान सकिएपछि गुणस्तरमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने विरुद्ध खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा हाल्छौं।' अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले गुाणस्तरहीन उत्पादनको ब्रान्ड सार्वजनिक गर्न नमिल्ने लामाले दाबी गरिन्। 'हामीले अनुसन्धानका क्रममा कुन ब्रान्डको कुन ब्याचमा समस्या देखिएको हो भन्न मिल्दैन,' लामाले भनिन्,। विभागले संकलन गरेका चामल, दाल, चाउचाउ, विस्कुट, पिठोलगायतका ठोस खाद्य वस्तुमा भने मिसावटको मात्रा भेटिएको छैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०५४ अनुसार गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना देखि २ बर्ष कैद वा दुवै कारबाही हुन सक्ने भएपनि विभागले भने खाद्य ऐन अनुसार कारबाही चलाउदै आएको छ। उपभोक्तवादीहरुले भने खाद्य ऐन पुरानो भएकाले संसोधन गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्। खाद्य ऐन्अनुसार यस्तो गल्ति गर्नेलाई २ हजार जरिवानादेखि ६ महिना जेल वा दुवै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो कुरा जनतालाई नभन्ने रे? होइन डिजीसाब ब्यापारीले हा्म्रो नामचाहिँ नभन्नु भनेर मुखमा बुझो लगाए कि के हो?
बयान होइन, त्यस्ता कम्पनीलाई बन्दै गरे वेश हुन्छ। हामीलाई खाने कुरामा विसादी दिने काम गर्ने? हाम्रो जीवनसँग खेलवाड गर्ने कम्पनीलाई मृत्युदण्ड दिए अझ राम्रो हुन्छ।